Ɔkwan a Wobɛfa So Ahu Nokware Som
KENKAN WƆ Abkhaz Afrikaans Albanian Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aukan Austrian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bicol Blackfoot Boulou Cambodian Carib Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Douala Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Frafra French Futuna (East) Ga Garifuna Georgian German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Greenlandic Guarani Guatemalan Sign Language Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Iban Iloko Indonesian Indonesian Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kinyarwanda Kirghiz Kisi Korean Krio Kwanyama Laotian Latvian Lhukonzo Lithuanian Luganda Luo Malagasy Mam Mapudungun Mauritian Creole Mbunda Medumba Mexican Sign Language Mizo Mozambican Sign Language Nahuatl (Guerrero) Navajo Ndebele (Zimbabwe) Nengone Nepali New Zealand Sign Language Nias Niuean Norwegian Norwegian Sign Language Nzema Oromo Ossetian Panamanian Sign Language Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Portuguese Portuguese Sign Language Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Romanian Sign Language Romany (Northern Greece) Romany (Southern Greece) Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Sarnami Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Shuar Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Swedish Swedish Sign Language Tagalog Tahitian Tatar Thai Thai Sign Language Tigrinya Tojolabal Tongan Totonac Tsonga Tswana Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Venda Wallisian Wayuunaiki Wolaita Wolof Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Sɛ wopɛ sɛ woyɛ Onyankopɔn adamfo a, ɛsɛ sɛ wode wo ho hyɛ ɔsom a Onyankopɔn pene so mu. Yesu kae sɛ “nokware asomfo” bɛsom Onyankopɔn wɔ “nokware” mu. (Yohane 4:23, 24) Ɔkwan a ɛteɛ biako pɛ na ɛwɔ hɔ a wɔfa so som Onyankopɔn. (Efesofo 4:4-6) Nokware som kɔ daa nkwa mu, na atoro som kɔ ɔsɛe mu.—Mateo 7:13, 14.
Wubetumi ahu nokware som denam nnipa a wɔde wɔn ho hyem a wobɛhwɛ wɔn no so. Esiane sɛ Yehowa ye nti, ɛsɛ sɛ ne nokware asomfo yɛ nnipa pa. Sɛnea akutu dua pa sow akutu pa no, saa ara na nokware som nso ma yenya nnipa pa.—Mateo 7:15-20.
Yehowa nnamfo wɔ obu kɛse ma Bible no. Wonim sɛ Bible no fi Onyankopɔn hɔ. Wɔma nea ɛka no kyerɛ wɔn kwan wɔ asetra mu, wɔde di wɔn haw ahorow ho dwuma, na wɔma ɛboa wɔn ma wosua Onyankopɔn ho ade. (2 Timoteo 3:16) Wɔbɔ mmɔden sɛ wɔde nea wɔka no bɛbɔ wɔn bra.
Yehowa nnamfo dodɔ wɔn ho. Yesu yii ɔdɔ adi kyerɛɛ nkurɔfo denam Onyankopɔn ho ade a ɔkyerɛɛ wɔn ne ayarefo a ɔsaa wɔn yare no so. Wɔn a wɔde wɔn ho hyɛ nokware som mu no nso yi ɔdɔ adi kyerɛ afoforo. Te sɛ Yesu no, wommu ahiafo anaa mmusua foforo animtiaa. Yesu kae sɛ nkurɔfo nam dɔ a n’asuafo dodɔ wɔn ho no so na ebehu wɔn.—Yohane 13:35.
Onyankopɔn nnamfo di ne din Yehowa no ni. So obi betumi ayɛ w’adamfo paa bere a ɔmfa wo din mfrɛ wo? Dabi! Sɛ yɛwɔ adamfo a, yɛde ne din frɛ no na yɛka ne ho asɛmpa kyerɛ afoforo. Enti ɛsɛ sɛ wɔn a wɔpɛ sɛ wɔyɛ Onyankopɔn nnamfo no de ne din frɛ no na wɔka ne ho asɛm kyerɛ afoforo. Yehowa pɛ sɛ yɛyɛ saa.—Mateo 6:9; Romafo 10:13, 14.
Te sɛ Yesu no, Onyankopɔn nnamfo kyerɛkyerɛ nkurɔfo Onyankopɔn Ahenni no ho ade. Onyankopɔn Ahenni no yɛ ɔsoro nniso a ɛbɛyɛ asase paradise. Onyankopɔn nnamfo ka Onyankopɔn Ahenni ho asɛmpa yi kyerɛ afoforo.—Mateo 24:14.
Yehowa Adansefo bɔ mmɔden sɛ wɔbɛyɛ Onyankopɔn nnamfo. Wɔwɔ obu ma Bible no na wɔdodɔ wɔn ho. Wɔde Onyankopɔn din nso frɛ no na wodi no ni, na wɔkyerɛkyerɛ afoforo Onyankopɔn Ahenni ho ade. Yehowa Adansefo de wɔn ho hyɛ nokware som mu wɔ asase so nnɛ.
Yehowa Adansefo baahe na wunim wɔn? Yɛn ho nsɛm bɛn na wunim ankasa?